Paris Saint-Germain oo Bacca bartilmaameedsanaysa – Gool FM
Paris Saint-Germain oo Bacca bartilmaameedsanaysa
(Paris) 09 Okt 2016 – Waxaa lasoo sheegayaa in Paris Saint-Germain ay dib usoo cusboonaysiin doonto dalab ay ku doonayso qannaaska kooxda AC Milan ee Carlos Bacca.
Horyaallada Ligue 1 ayaa la isla dhexmarayay inay xagaagii doonayeen laacibka reer Colombia, yeelkeede waxay guddoosadeen inay dalabkooda baajiyaan.
Si kastaba, kooxda PSG ayaan horyaalka ku bilowday si liidata, waxaa sidoo kale bandhig wanaagsan samaynaya Bacca, taasoo keentay in Unai Emery uu markale garaaco albaabadda Rossoneri oo uu 30-jirkan ka doonayo bisha Jannaayo.
Sida uu qorayo ESPN, Emery ayaa ka walaacsan inuusan dookhyo badan oo dhanka weerarka dhexe ah haysan marka laga yimaaddo Edinson Cavani, sidaa darteed wuxuu macallinkan Spanish-ka ihi doonayaa wiilkan ay is yaqaanneen xilligoodii Sevilla.
Kabtanka xulka Holland ee Wesley Sneijder oo seegaya kulanka France